Pioneer Lake Cabin. I-Rustic ehlala ngaphandle kwegridi - I-Airbnb
Pioneer Lake Cabin. I-Rustic ehlala ngaphandle kwegridi
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguIrene And Willis
UIrene And Willis yi-Superhost
Le khabhathi eyenziwe ngesandla ibekwe kumgama oziikhilomitha ezingama-27 ukusuka kuhola wendlela 5 kwiPioneer Lake. Le ndawo yokuhlala ikude, ayilungelanga uhambo lwemini ukuya eJasper. Kungohambo lweyure enye ukuya kuhola wendlela ogangathiweyo. NCEDA UQAPHELE: Ufuna isithuthi esinemvume. I-SUV okanye ilori yokulanda. Oku kulungele abo bathanda ngaphandle, indalo ezolileyo kunye nolwazi malunga nokuhlala emva kwelizwe. Embindini wezona ndawo zinkulu zokuhamba ngekhephu e-BC, ilizwe lekhephu elinzulu, ukhenketho olumangalisayo lwesileyiti ukusuka apha.
Ikhabhinethi inesitovu sepropane, isitovu samaplanga esibaswayo kunye neBlaze King yokutshisa. Akukho gumbi lokuhlambela ngaphakathi kwendlwana, indlu yangasese ingaphandle ayinayo ishawa. Amanzi afudunyezwa esitovini ukuze ahlambe izitya kwaye unqwenela ukuhlambela ibhafu. Kukho iikhabhathi zasekhitshini ezinazo zonke izinto zasekhitshini oya kudinga ukupheka ngazo. Izitya, izinto zesilivere, amalaphu esitya kunye nesepha yesitya zibonelelwa, kunye nezibane zepropane. Ukupholisa ehlotyeni, ukufudumala ebusika. Ikhabhinethi yindawo evulekileyo, kwindawo ephezulu kunye kumgangatho ophambili.
Kukho ichibi elincinane phambi kwendlwana kunye nomzila ojikelezayo. Uninzi lwamadada enza ikhaya apho ehlotyeni, kunye nebhere, i-moose, i-porcupine, i-marten kunye neentaka ezininzi.
Umbuki zindwendwe ngu- Irene And Willis
Siza kukwalathisa kwikhabhathi kodwa siya kukushiya apho uyonwabele uxolo noxolo. Kuya kufuneka ube nezakhono ezithile zokusinda ukuze uhlale kule ndawo yokuhlala, njengokukhanyisa kunye nokugcina isitovu seenkuni esibaswayo kunye nokusebenzisa indlu yangasese yangaphandle, Asiyiyo eyabantu abangalungiselelwanga okanye abatyhafileyo.
Siza kukwalathisa kwikhabhathi kodwa siya kukushiya apho uyonwabele uxolo noxolo. Kuya kufuneka ube nezakhono ezithile zokusinda ukuze uhlale kule ndawo yokuhlala, njengokukhanyisa…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Valemount